Tambanjotra Pixel: tolotra ho an’ny serasera sy fifaninanana | NewsMada
Tambanjotra Pixel: tolotra ho an’ny serasera sy fifaninanana
Nosokafana ny faran’ny herinandro lasa teo teny Ambatobe, ny tambajotra iray momba ny serasera, Pixel, an’ny orinasa Davinci web. « Atao izay ifantohan’ny miditra amin’zany tambajotra izany hisafidy sy hividy karazana tolotra momba ny serasera atolotry ny Pixel, hitarika azy ireo handray anjara amin’ny fifaninanana lalao hahazoana fanomezana isan-karazany. Izay ny zava-baovao atolotray », hoy ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny Davinci web.
Manampy sy manamafy kokoa ny fahitan’ny orinasa amin’izay tokony hataony momba ny serasera io tambajotra io. Mampahalala ireo karazana fitaovana ho an’izany ny Pixel, ny efa misy eto an-toerana sy ny any ivelany, sy ny famantarana izany manokana hisorohana ny hosoka. Volavolaina miaraka amin’izany tolotra izany ireo karazan-dalao hifaninanana. Izany hoe, karazana toeram-pivarotana amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra ny endriky ny tsena atolotra ny mpanjifa, hividianana izay nofidina sy mety hahazoana loka samihafa.
Izao tetikasa izao ny fampivelarana izany ho an’ny tanora tsy ankanavaka. Ny Pixel izao efa miara-miasa amin’ny Sayna, manao asa sosialy, ary tsy mitady tombony amin’izay ataony. Tanjona ny fanofanana tanora maimaim-poana amin’ny asa momba ny serasera, araka ny teknolojia ankehitriny sy hahamora ny hahitan’izy ireo asa.